HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo la soo wareegaysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Wolverhampton Wanderers Ruben Neves.
May 15, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhawdahay saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Wolverhampton Wanderers ee Ruben Neves.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Portugal ayaa mar kale ciyaaryahan muhiim u ah kooxdiisa Ingiriiska intii lagu jiray xilli ciyaareedka 2021-22, isagoo saftay 35 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay afar gool iyo labo caawin.
Neves kaliya labo sano ayaa uga hartay inuu ku sii socdo qandaraaskiisa haatan, inkastoo, waxaa jiray warar badan oo ku saabsan mustaqbalkiisa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
Kooxaha Manchester United iyo Arsenal ayaa ka mid ah kooxaha loo aqoonsanayo inay xiiseynayaan ciyaaryahanka khadka dhexe. Si kastaba ha ahaatee, hadal heynta ku aadan u wareegida Camp Nou ayaa sii kordhayay usbuucyadii dhawaa, iyadoo maamulaha Barcelona Xavi uu sheegay inuu go’aansaday inuu kor u qaado qadkiisa dhexe inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Sida laga soo xigtay Sport, wakiilka Neves ee Jorge Mendes ayaa haatan wadahadalo horumarsan kula jira kooxda reer Catalonia si uu ugu dhaqaaqo macmiilkiisa suuqa soo socda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Aurelien Tchouameni oo Monaco ka tirsan iyo Martin Zubimendi oo ka tirsan Real Sociedad ay sidoo kale bartilmaameed u yihiin, laakiin Barcelona ayaa dooqa koowaad u aqoonsatay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Wolves. Neves ayaa lagu eedeeyay inuu ka warqabo xiisaha uga imaanaya Premier League laakiin waxaa ka go’an inuu dhameystiro u dhaqaaqista Camp Nou inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Bortuqiisku waxa uu Wolves kaga soo biiray Porto bishii Luulyo 2017, waxana uu kooxda reer England u matalay 211 kulan tartamada oo dhan, waxa uu ka qayb qaatay 24 gool iyo 12 caawin.
Neves ayaa dhawaan dhaawac jilibka ah ku maqnaa laakiin haatan waxa uu ka soo muuqday afartii kulan ee ugu dambeeyay ee ay kooxdiisu ciyaartay oo uu ku jiro kulankii ay axadii 1-1 la galeen Norwich City.